Buyadida ubuhle beBMW 7
INESITHUNZI iBMW 7 Series ekahle kubantu abanamabhizinisi Izithombe: DBN SPOTTER
FANELESIBONGE BENGU | October 7, 2019
KUJAME umqondo ukuthi kumele ngiqale kuphi uma ngichaza ngeBMW 7 Series ngoba kuningi engingakusho ngayo.
Angazi noma ngisheshe ngisho intengo yayo ebibambisa amakhanda abaningi uma ngibatshela, noma ngichaze indlela ebukeka ngayo ngaphandle nangaphakathi, ngisho indlela ehamba ngayo noma ngisho ubuchwepheshe enabo.
Njengoba inkulu nje, ziningi nezinto enazo. Kodwa mhlawumbe kumele ngiqale ngendlela ebukeka ngayo ngoba ishintshile kwazise bayithuthukisile.
Into yokuqala edonsa amehlo yigrille yayo enkulu ngaphambili ebizwa ngeBMW kidney grille. Ebesihamba ngayo bayifake amaBMW Laserlight esikhundleni sama-Adaptive LED Headlights. La malambu akhanyisa bha futhi ayazidima abuye azikhanyise kakhulu uma kungasekho moto. Uma kukhona ohamba ngezinyawo emgwaqweni amuthi bhanya ukuze ezobona ukuthi kukhona imoto ezayo.
Baphinde bayihlobise ngechrome ngaphambili, ezinhlangothini ngezansi nasemawindini kanjalo nangemuva ngaselambini nakubhampa ngezansi okuze kushaye nasezinqaweni ezimbili.
Uma uyibuka ngohlangothi uqaphela amarimu ayo awu-20 inch. Ngaphandle kwalokho uyabona ukuthi iwuhuntshu njengoba inewheelbase engu-5,260 mm.
Uyaqaphela futhi nokuthi izicabha zinkulu ukuze kube lula ukungena nokuphuma. Uma ungena ngaphakathi yilapho ufike ubambe ikhanda khona, ikakhulukazi ngemuva.
Ngaphakathi bayifake izihlalo zesikhumba ezifudumalayo, ozihlela ngogesi futhi ezikumasajayo. Asigcini ezihlalweni kodwa sigijima nasezindaweni zokuphumuza izingalo phakathi nendawo nasezicabheni.
Ngaphambili ibukeka ngathi amaBMW esimanje. Inescreen esingu-10.25 inch ngaphambili lapho uxhuma khona iselula nge-Apple CarPlay, uveze inkombandlela ekutshela nesiminyaminya nokunye.
Kuvela nengaphambili ebusuku uma ungaboni kahle ngosizo lwekhamera. Ngaphezu kwesiteringi kunesinye esingu-12.3 inch seBMW Live Cockpit Professional esiveza ijubane, inkombandlela, umculo odlalayo, indlela edla ngayo uphethroli nokunye.
Yingemuva lapho okumnandi kakhulu uhlala unethezeke. Isihlalo esingemuva kwesomgibeli ngaphambili siyakwazi ukukuhlalisa unabe. Lesi sangaphambili siyagoqeka ukuze kube nesikhala esanele ngemuva. Uthi upepenyeka sibe sikuwotawota. Uma ungafuni ukubonwa unyusa amakhethini ngebhathini futhi uzivalele ne- sunroof. Eyangaphambili isunroof bayibiza ngepanorama glass roof sky lounge kanti iyakhanya ebusuku ngombala okhethwa nguwe ukuthi ukhanyise kanjani ngaphakathi emotweni.
Ngemuva kwezihlalo zangaphambili kunamascreen amabili angu-10 inch futhi uyakwazi ukufaka amaheadphone uzidlalele okuthandwa nguwe ungaphazanyiswa. Abanye basuke belalele umculo oqhuma ezipikheni zeBowers & Wilkins Diamond ozifaka uma uthanda.
Injini nezinsiza zomshayeli
Le moto inenjini kadizili engu-3.0-litre six-cylinder enamandla angu-195 kW netorque engu-620 Nm. Ungayibuka inkulu kodwa iyashesha emgwaqeni ngoba ukusuka ku-0 iye ku-100km bathi kuyithatha imizuzwana engu-6.2. Ngo-100km ibisebenzisa amalitha kadizili angu-7.9 ngo-100km. Ihamba kamnandi emgwaqeni futhi intofontofo amabhampu ayizweli njengoba ine-air suspension.
Njengoba ngenhla ngithe kumnandi kakhulu ukuba ngemuva kodwa nokuyishayela akuyona into enzima ngoba kuningi okusiza umshayeli. Kukhona Heads Up Display. Esiteringini kunamabhathini okuthi izishayele ngosizo lwe-Active Cruise Control futhi iyama uma imoto ephambi kwakho ima iphinde isuke uma nayo isisuka ngaphandle kokuthi kube khona okuciphizayo. Isiteringi iyakulekelela ukuthi ijike.
Uma upaka, iyazingenela futhi iphinde ihlehle ibanga elingu-50 metres. Uma indawo opaka kuyo incane uyakwazi ukuthi wehle bese uyilawula ngokhiye ingene noma iphume ungaphandle.
IBMW 730Ld yakhelwe osozimali, ikakhulukazi osomabhizinisi, abafuna imoto enesithunzi. Ngeyabantu okuthi uma besemotweni bakhululeke bafike lapho beya khona bengakhathele. Njengoba ngishilo isihlalo somshayeli siyakuwotawota kanjalo nezangemuva. Kumele ngigcizelele ukuthi ngeyosozimali ngoba intengo yayo iphezulu futhi lena ebesihamba ngayo, izinto ezengeziwe kuyo zibiza uR306 150.
R2 146 971.48
Ifika ne-motorplan maintenance contract eneBMW On Call yeminyaka emihlanu noma u-100 000km.